Izindaba - Yiziphi izingqinamba okufanele zicatshangelwe lapho ukwakheka komugqa wokubumba okuzenzakalelayo?
1. Ukukhethwa kwemishini emikhulu nokusizayo yomugqa wokukhiqiza webhizinisi lokubumba nokuhlelwa kolayini wokukhiqiza. Uhlobo lwezinto ezithinta kakhulu ukwakheka kokumodela, njengesihlabathi esijwayelekile sobumba, isihlabathi se-sodium silicate nesihlabathi se-resin; ukumodela izindlela zokucwaninga; imikhakha yomkhiqizo wensimbi, njenge-cast iron nensimbi yensimbi; Usayizi wokulingisa nezidingo zesikhathi sohlelo lokupholisa; ukusakaza ikhwalithi yokukhiqiza nokunemba kungathinteka ngqo kuzinto ezifana nezidingo.
2. Ifomu, ukucaciswa nokusebenza komshini wokubumba yizici ezinqumayo ezithinta ukuxhuma kwentambo yokukhiqiza. Isibonelo, noma ngabe usebenzisa umshini ojwayelekile wokubumba noma umshini wokubumba ingcindezi, noma ngabe umshini owodwa noma umugqa womhlangano weyunithi, ukukhiqiza, ukusetshenziswa kwemishini nokuzenzekelayo, njll., Okunquma ngqo ukukhetha kwemishini yokusiza nokuhlelwa ulayini wokukhiqiza.
3. Ukusebenza nokuphathwa kwendlela yokukhiqiza kuzothinta ukwakheka kwesakhiwo semishini esizayo kanye nendlela yokufunda yokuhlelwa kolayini wokukhiqiza, isibonelo, okuqhubekayo noma okuphakathi.
4. Izindlela zokulawula nokuphatha kolayini wokukhiqiza kanye nedivayisi yokuthumela amasiginali ahlobene nayo izothinta ukwakheka kwenhlangano yendawo yomshini osizayo womugqa womhlangano kanye ne-conveyor yokulingisa nefomu lokwakhiwa kwentambo yomugqa wokukhiqiza.
5. Izimo zeFektri nezidingo zokuvikelwa kwemvelo nakho kuthinta ukwakheka kwemishini emikhulu neyesizayo. Ukulungiswa kabusha kweshabhu elidala kuzoba nale mikhawulo nezidingo ezahlukahlukene zokwakheka kolayini wokukhiqiza webhizinisi lokumodela. Kwesinye isikhathi izidingo zokuvimbela uthuli nokunciphisa umsindo wezemvelo ku-workshop yethu kuzophinde kuthinte ukukhetha kwemishini emikhulu neyesizayo. Isibonelo, ukulawula umsindo ngokuqinile, ulayini wokukhiqiza awunakusebenzisa isidlidlizi sokudlidliza, kepha isihlukuzi sigubhu.
Isikhathi Iposi: Feb-01-2021
I-Sandbox, Flask Isikhunta Machine, Molding Ekubunjweni Flask, Semi-okuzenzakalelayo Molding Machine, Flask Ukubumba, Punch Out Umshini,